Trano fisakafoanana pizza amidy any UAE Dubai - BusinessFinder.Me
Famintinana - Safidy roa hivarotana ny orinasa AED 500K ho an'ny fivarotana & fitaovana na ho an'ny AED 1.5M ho an'ny fivarotana miaraka amin'ny franchise firenena ho an'ny UAE manontolo. - Toeram-pisakafoanana pizza efa vita tanteraka ary mety hivoatra. - Hofaina aloa hatramin'ny faran'ny taona...
- Safidy roa hivarotana ny orinasa AED 500K ho an'ny fivarotana & fitaovana na ho an'ny AED 1.5M ho an'ny fivarotana misy franchise firenena ho an'ny UAE manontolo.
- Toeram-pisakafoanana pizza efa vita tanteraka ary mety hivoatra.
- Ny hofan-trano voaloa hatramin'ny faran'ny taona 2021.
- Ny fahazoan-dàlana ara-barotra manan-kery hatramin'ny faran'ny SEPT 2022.
- Tsara ny toerana ao amin'ny JLT, misy fifamoivoizana an-tongotra be dia be ary akaikin'ny Station Metro.
- Fisakafoana mahazatra, alaina ary livraison an-trano.
- Marika fanta-daza manana naoty ambony amin'ny sehatra an-tserasera (Talabat, Zomato, Deliveroo, ary Eat Easy).
- lakozia feno fitaovana misy rafitra famonoana afo napetraka sy fandrika grika
- Nankatoavin'ny Dubai Mincipality
– Kaonty banky
– Efitrano fipetrahana ivelany
Vonona ny handeha hatramin'ny andro voalohany!
Trano fisakafoana #Pizza amidy any dubai
Trano fisakafoanana #pizza amidy any uae
#Running Pizza trano fisakafoanana amidy any dubai